Phupha ngeSitishi esiyiNtloko Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Nangona uninzi lwabantu lungahoyi kangako kubomi bemihla ngemihla, abaphathi bezikhululo banomsebenzi onoxanduva. Abahambi abaninzi bakaloliwe bahlala bengxamile kwaye bexinekile, kufuneka bathathe uloliwe othile okanye babenonophele imithwalo yabo. Abasebenzi bezikhululo zoololiwe bahlala behoywa. Abaphathi bezitishi ngokudibeneyo banoxanduva kuyo yonke imimiselo yezithuthi zikaloliwe, bayilungelelanisa bayiphumeza.
Nangona kunjalo, ukungakhathali kwaba bantu kungacutshungulwa kwinqanaba le-subconscious: kuyenzeka ukuba abantu baqale bangamqapheli umphathi wesikhululo, kodwa ke baphupha ngako. Ngaba athetha ntoni amaphupha anje?
1 Uphawu lwephupha «umphathi wesikhululo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umphathi wesikhululo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «umphathi wesikhululo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umphathi wesikhululo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokutolikwa ngokubanzi, umphathi wesikhululo uhlala efuzisela umntu ephupheni. umhlobo olungile lomntu ochaphazelekayo. Iphupha elo lingangumqondiso wokuba lo mntu uzityand 'igila uya kuhlala esecaleni kwakho kwixesha elizayo, azokuxhasa kwaye angakunika iingcebiso ezibalulekileyo. Ukuzimasa akunxulumene kuphela nenqanaba leemvakalelo, kodwa kunye namandla kunye nezenzo.
Ukuba umphathi wesikhululo ungowasemzini ephupheni, iphupha elo kufuneka liqwalasele ukuba ngabaphi abantu anokubhekisa kubo kwimeko yakhe ngqo. I-confidante entsha kunye neqabane lobomi lisenokukwazi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba umphuphi aqonde ukuba umhlobo omxhasayo akazukuhamba kunye nokumxhasa kuphela, kodwa uya kulawula kakhulu ubomi bakhe nobomi bemihla ngemihla. Kukhokelela kwiindlela obungayi kuthatha ngenye indlela, kodwa ngelo xesha akuyi kukuzisela nantoni na embi.
Ukongeza, ngokotoliko ngokubanzi, umphathi wesikhululo unokubonelela ngomqondiso we Imbopheleleko kukuba ayikuthandi ukuphupha. Kuya kufuneka ujongane nabasemagunyeni kungekudala, kungenjalo ngekhe ukwazi ukufikelela kwiinjongo zakho.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba uzibona ungumphathi wesikhululo ephupheni lakho, kuya kufuneka uphonononge kwakhona ukuba ngaba udalela omnye umntu iingxaki kubomi bemihla ngemihla okanye ungumthwalo kuye. Uphawu lwephupha kule meko inokuba luphawu lwalo.
Uphawu lwephupha «umphathi wesikhululo» - ukutolikwa kwengqondo
Nokuba ngoktoliko lwengqondo lwephawu 'lokuphatha umphathi' wephupha, a umhlobo osenyongweni ubonwe ngubani owazi lo mntu kuthethwa ngaye ngcono kunokuba ezazi engaqondanga kwaqondwa ukuba umntu ozithembileyo uyasazi isimilo sakhe, uhlobo kunye neemeko zobomi babucala nobungcali kwaye unombono ngokubanzi. Kungenxa yoko ukuphupha kukwavumela uncedo olusondeleyo kubomi bokwenyani.
Isimboli yephupha «umphathi wesikhululo» - ukutolika kokomoya
Ngokombono wokomoya, umphathi wesikhululo usenokuthi ephupheni abhekisele ku hamba kungekudala o Uphuhliso olungaphezulu oko kuyakwakhiwa ngolwazi lokomoya.